LokaChantha: September 2010
... ပြန် စဉ်းစားကြည့်စမ်း။
အဘိဓမ္မာမလေ့လာခင်က အသိနဲ့ အဘိဓမ္မာလေ့လာပြီးမှ အသိနဲ့ ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကွာခြားမှုရှိရဲ့လား ... မရှိဘူးလား။
စကားသုံးတာတွေကို ပိုပြီး နားလည်လာတယ် မဟုတ်ဘူးလား။
ဆိုပါတော့၊ စေတနာ .. စေတနာနဲ့ ပြောနေတယ်။ မြန်မာစကားမှာတော့ စေတနာဆိုတာ ကောင်းတာကို စေတနာခေါ်တာ။
မင်းကို ငါ .. စေတနာနဲ့ ပြောတယ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့ စေတနာနဲ့ ပြောတယ်လို့ ဆိုတာ။
တကယ်ကတော့ စေတနာဆိုတာ ဘာလဲ?
စေ့ဆော်ခြင်း သဘောတရား၊ ကောင်းတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်၊ မကောင်းတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ပြီးတော့ ဘုန်းကြီး ရေစက်ချတဲ့အခါကျတော့ အာသဝေါတရားလေးပါးတို့၏ ကင်းရာ ကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်သို့လို့ ရွတ်ကြတာ ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လား။
အာသဝေါတရားဆိုတာ အခု နားလည်ပြီ ဆိုပါတော့။ မမှတ်မိရင်တောင် ပြန်ကြည့်ရင် သိတယ်။
ဘုန်းကြီးတွေ တရားဟောတဲ့အခါ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ .. ဒီလိုသုံးတာတွေ ရှိတယ်။
သမုဒယ၊ တဏှာလောဘဆိုတဲ့ စကားတွေကို အခု နားလည်လာပြီ မဟုတ်လား။
အရင်ကတော့ ကိုယ်က နားလည်တယ် ထင်တာ။
တကယ်တော့ နားမလည်ဘူး။ မြန်မာစကားဆိုပြီး နားလည်သလို ထင်တာပဲ ရှိတယ်။
အခုတော့ အဲဒါတွေကို တိတိကျကျ နားလည်လာပြီ။
ငါ စိတ်မကောင်းဘူးကွာ၊ စိတ်ဆိုးတယ်လို့ ပြော့လေ့ရှိကြတယ်။
အမှန်ကတော့ အဲဒီစိတ်ဆိုတာဟာ စိတ်ရော၊ စေတသိက်ရော နှစ်ခုလုံးကို ပေါင်းပြီး ပြောနေတာ။
စိတ်ချည်းသက်သက် ဆိုးလို့ မရဘူး။
စေတသိက်ဆိုးတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ စိတ်ဆိုးတယ် ခေါ်ရတာ။
အဲသလို အဘိဓမ္မာကို နားလည်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် အသိဉာဏ်ဟာ အရင်ကနဲ့ မတူတော့ဘူး ဖြစ်လာတယ် မဟုတ်လား။
ပြီးတော့ practical side ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဟာက ကုသိုလ်၊ ဘယ်ဟာက အကုသိုလ်ဆိုတာ နားလည်ပြီ၊ သိနေပြီ။
သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် အကုသိုလ်ဆိုတာက မကောင်းတဲ့ အကျိုးပေးတတ်တယ်။
ကုသိုလ်ဆိုတာက ကောင်းတဲ့အကျိုး ပေးတတ်တယ်။
အဲဒီတော့ ကောင်းတဲ့အကျိုးကို လိုချင်ရင် ကုသိုလ်ကို ပွားများ အားထုတ်ရမယ်။
မကောင်းတဲ့အကျိုးကို မလိုချင်ရင် အကုသိုလ်ကို ရှောင်ရမယ်။
သိတဲ့နေရာမှာ ရိုးရိုးသိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ တကယ့်ကို တိတိကျကျ သိတာ။
ဘယ်လိုဟာမျိုးက အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်၊ ဘယ်လိုဟာမျိုးက ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့လည်း ခွဲခြား သိလာတယ်။
ဒါတွေဟာ အဘိဓမ္မာနားလည်တဲ့ အကျိုးတွေပေါ့။
လက်တွေ့ကျင့်သုံးရာမှာ ရနိုင်တဲ့ အကျိုးတွေ။
ပြီးတော့ ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခု ပြုတဲ့ နေရာမှာ တိဟိတ်ဥက္ကဌ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်လာပြီ မဟုတ်လား။
အဘိဓမ္မာ နားမလည်သေးတဲ့ သူဆိုရင် လုပ်ချင်မှ လုပ်တတ်မယ်။
ဘုန်းကြီးက သင်ပေးလို့ လုပ်ချင်လည်း လုပ်တတ်သွားမယ်ပေါ့လေ။
သူတို့ဟာ သူတို့တော့ မလုပ်တတ်သေးဘူးပေါ့။
အဲဒါကြောင့်မို့ အဘိဓမ္မာ နားလည်တဲ့ အကျိုးဟာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူး။
မိမိရဲ့ အနာဂတ်ဘဝ ဖန်တီးတဲ့အခါမှာ မဂ်ဖိုလ်ရနိုင်တဲ့ အခြေခံပါအောင် ဖန်တီးပေးမှ မဂ်ဖိုလ်ရမှာ။
ဒီဘဝမရလည်း နောက်ဘဝရအောင် ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ကဖန်တီးမှ ရမှာ။
ဘယ်လို ဖန်တီးရမယ်ဆိုတာ အခု သိပြီ။
ကုသိုလ်ကောင်းမှု လုပ်တဲ့အခါမှာ တိဟိတ်ကုသိုလ်၊ ဥက္ကဌ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင် လုပ်မှ နောက်ဘဝ ဘဝတွေမှာ တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ မဂ်ဖိုလ်ရနိုင်တဲ့ အဆင့်အတန်းရောက်မယ်။
ဒါတွေ သိပြီဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အနာဂတ်ဘဝတွေကို ဒီဘဝကနေပြီး စီမံနိုင်တယ်ပေါ့။
ဒါဟာ အဘိဓမ္မာတတ်လို့၊ အဘိဓမ္မာမတတ်ရင် မဖြစ်ဘူး .. ဒါတွေ မလုပ်တတ်ဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ အဘိဓမ္မာနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့် လက်တွေ့အကျိုးရှိအောင် အများကြီးလည်း လုပ်နိုင်တယ်။
ပြီးတော့ လက်တွေ့ အကျိုးသိပ်မရှိဘူး ထားဦး၊ သဘောတရားတွေကို နားလည်တဲ့နေရာမှာ သူများတွေနဲ့ မတူတော့ဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နားလည်တာဟာ ရိုးရိုး နားလည်တာမျိုး မဟုတ်တော့ဘူး။
သုတ္တန်တွေ ဘာတွေ ဖတ်ပြီဆိုရင်လည်း တချို့နေရာတွေမှာ ကိုယ်က အယူအဆ မလွဲတော့ဘူး။ ကိုယ်က အဘိဓမ္မာ နားလည်ပြီးသား ဖြစ်နေပြီ။
ဒါကြောင့်မို့ အဘိဓမ္မာသင်ရတဲ့အကျိုးဟာ မကုန်နိုင်အောင် ရှိတယ်။
ဒီအကျိုးတွေကို မိမိတို့ဟာ အဘိဓမ္မာလေ့လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ရကြပြီပေါ့။
အဲဒီတော့ မိမိတို့ အဘိဓမ္မာကို နားလည်တာဟာ ဘယ်လောက်သာ ရှိသေးသလဲဆိုတော့ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် နည်းနည်းပဲ ရှိသေးတယ်။
ဆိုပါတော့၊ ပင်လယ်ကမ်းစပ်သွားပြီး I have seen the Pacific ocean. ငါ ပစ္စိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကြီး မြင်ပြီဟေ့ ..လို့ ကြွေးကြော်ပေမယ့် ကိုယ်မြင်တဲ့ ပစ္စိဖိတ်သမုဒ္ဒရာက ဘယ်လောက်ရှိသေးလို့လဲ။
တကယ့် ပစ္စိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနဲ့စာလိုက်ရင် အပုံတစ်ရာပုံ တစ်ပုံတောင် မရှိသေးဘူး။
အဲဒါမျိုးလိုပဲ၊ ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာဒကာမတို့တတွေ နားလည်တဲ့ အဘိဓမ္မာဟာ မြတ်စွာဘုရား မပြောနဲ့၊ အရှင်သာရိပုတ္တရာ နားလည်တဲ့ အဘိဓမ္မာနဲ့စာရင် ဘာမှ မဟုတ်သေးဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် I am an Abhidhamma scholar. လို့ ပြောဝံ့ဖို့တောင် ဦးဇင်းတို့ မပြောဝံ့ဘူး။
Student of Abhidhamma ပဲ။ သူများတွေက scholar လို့ ပြောနေကြတယ်။
ကိုယ်သိတာက တကယ်ကျတော့ ဘာမှ မဟုတ်သေးဘူး။
ခေတ်ဥပမာနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ရေခဲတောင်ကြီးတွေဟာ ရေပေါ်ပေါ်နေတာက ဆယ်ပုံတစ်ပုံလောက်ပဲ ရှိတာမဟုတ်လား။
အဲဒါမျိုးလိုပဲ။ ကိုယ်သိတာက ဆယ်ပုံတစ်ပုံလောက်ပဲ ရှိချင်မှ ရှိဦးမယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ မပြတ် လေ့လာသွားရမှာပဲ။
နည်းနည်း နည်းနည်းချင်း ဒီတစ်ခေါက်ထက် နောက်တစ်ခေါက်က ပိုသိလာမယ်။
နောက်တစ်ခေါက်ထက် နောက်တစ်ခေါက်က အသိပိုလာမယ်။
အသိပိုလာလေ တရားကို လေးလေးနက်နက် သိလေ၊ လေးလေးနက်နက် သိလေ မြတ်စွာဘုရားကို ပိုပြီး ကြည်ညိုလေပဲ။
တရားသိတဲ့အခါ ပိုကြည်ညိုတယ်။ ကြည်ညိုတတ်လာတယ်။
တရားမသိဘဲ အရမ်းကြည်ညိုတာထက် တရားသိပြီး ကြည်ညိုတာက ပိုကောင်းတယ်။
အဲဒါကြောင့် အကျိုးတွေ အများကြီး ရနိုင်တဲ့ အခြေခံအဘိဓမ္မာကို ငါတို့ အစကနေ အဆုံးတိုင်အောင် လေ့လာအားထုတ်ပြီးပြီဆိုတာ အလွန်ဝမ်းသာဖို့ ကောင်းတယ်။
၁။ ခန္ဓာငါးပါး ရုပ်နာမ်တရား၏ မမြဲသောအဖြစ်ဖြင့် မှတ်ကြောင်းဖြစ်သော အနိစ္စလက္ခဏာ။
၂။ ခန္ဓာငါးပါး ရုပ်နာမ်တရား၏ ဆင်းရဲသောအဖြစ်ဖြင့် မှတ်ကြောင်းဖြစ်သော ဒုက္ခလက္ခဏာ။
၃။ ခန္ဓာငါးပါး ရုပ်နာမ်တရား၏ အနှစ်သာရမဟုတ်ခြင်း၊ အလိုသို့ မလိုက်ခြင်းအမှတ်ဖြင့် မှတ်ကြောင်းဖြစ်သော အနတ္တလက္ခဏာ။
၁။ အနိစ္စာနုပဿနာ = ခန္ဓာငါးပါး သင်္ခါရတရားတို့ကို မမြဲသောအားဖြင့် အဖန်တလဲလဲ ရှုဆင်ခြင်ခြင်း။
၂။ ဒုက္ခာနုပဿနာ = ခန္ဓာငါးပါး သင်္ခါရတရားတို့ကို ဆင်းရဲသောအားဖြင့် အဖန်ဖန် ရှုဆင်ခြင်ခြင်း။
၃။ အနတ္တာနုပဿနာ = ခန္ဓာငါးပါး သင်္ခါရတရားတို့ကို အစိုးမရ အလိုသို့ မလိုက်သောအားဖြင့် အဖန်တလဲလဲ ရှုဆင်ခြင်ခြင်း
သောတာပတ္တိမဂ်စိတ်အခိုက်အတန့်၌ ဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို သောတာပတ္တိမဂ္ဂဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ခေါ်၏။
ပထမရသော သောတာပတ္တိဖိုလ်မှ စပြီး သကဒါဂါမိမဂ် မရမချင်းတိုင်အောင် သောတာပတ္တိဖလဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ခေါ်၏။
ဘဝသံသရာတွင် အလွန်ဆုံး ၇-ဘဝသာ နေပြီး နောက်ဆုံးဘဝ၌ ဧကန် ရဟန္တာဖြစ်ကာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြု၏။
၁။ သတ္တက္ခတ္တုပရမသောတာပန် = ခုနစ်ဘဝ၏ အဆုံး၌ နိဗ္ဗာန်သို့ စံဝင်သောပုဂ္ဂိုလ်။
၂။ ကောလံကောလသောတာပန် = နှစ်ဘဝမှ ခြောက်ဘဝတိုင်အောင် ပဋိသန္ဓေနေ၍ ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်သောပုဂ္ဂိုလ်။
၃။ ဧကဗီဇသောတာပန် = တစ်ဘဝသာလျှင် ပဋိသန္ဓေတည်နေ၍ ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်သောပုဂ္ဂိုလ်။
သောတာပတ္တိမဂ်စိတ်သည် ဒိဋ္ဌိနှင့် ဝိစိကိစ္ဆာကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်၏။
ကျန်ကိလေသာများအတွက် အပါယ်ကို ကျစေနိုင်သော ကိလေသာများကို ပယ်၏။
သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည် အပါယ်လားစေနိုင်သော အကုသိုလ်တို့ကို မပြုလုပ်တော့။
ငါးပါးသီလ လုံးဝ လုံခြုံ၏။ အသက်သာ အသေခံမည်ဖြစ်ပြီး ငါးပါးသီလကို ကျူးလွန်မည် မဟုတ်ပေ။
သောတာပန်ဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်၌ အကုသိုလ်စိတ် ၁၂-ပါးထဲမှ ဒိဋ္ဌိဂတသမ္ပယုတ်စိတ် ၄-ပါးနှင့် ဝိစိကိစ္ဆာသဟဂုတ်စိတ် ၁-ပါး၊ ပေါင်း ၅-ပါးကို ပယ်၏။
တရားဆက်အားထုတ်ပြီး ဝိပဿနာဉာဏ်မှာ ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ်က စ၍ အဆင့်ဆင့် တက်သွားကာ ဒုတိယမဂ်ရသော အခိုက်အတန့်၌ သကဒါဂါမိမဂ္ဂဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်၏။
ပထမ သကဒါဂါမိဖိုလ် ရသည်မှ စ၍ အနာဂါမိမဂ်မရမီတိုင်အောင် သကဒါဂါမိဖလဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်၏။
လူ့ပြည်သို့ ပဋိသန္ဓေအားဖြင့် တစ်ခေါက်သာ ပြန်လာတော့၏။
၁။ ဣဓပတွာ ဣဓပရိနိဗ္ဗာယီ = ဤလူ့ဘုံ၌ သကဒါဂါမ်ဖြစ်၍ ဤလူ့ဘုံ၌ပင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော သကဒါဂါမ်။
၂။ ဣဓမတွာ တတ္ထပရိနိဗ္ဗာယီ = ဤလူ့ဘုံ၌ သကဒါဂါမ်ဖြစ်၍ ထိုနတ်ဘုံ၌ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော သကဒါဂါမ်။
၃။ တတ္ထပတွာ တတ္ထပရိနိဗ္ဗာယီ = ထိုနတ်ဘုံ၌ သကဒါဂါမ်ဖြစ်၍ ထိုနတ်ဘုံ၌ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော သကဒါဂါမ်။
၄။ တတ္ထပတွာ ဣဓပရိနိဗ္ဗာယီ = ထိုနတ်ဘုံ၌ သကဒါဂါမ်ဖြစ်၍ ဤလူ့ဘုံ၌ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော သကဒါဂါမ်။
၅။ ဣဓပတွာ တတ္ထနိဗ္ဗတ္တိတွာ ဣဓပရိနိဗ္ဗာယီ = ဤလူ့ဘုံ၌ သကဒါဂါမ်ဖြစ်၍ ထိုနတ်ပြည်၌ ဖြစ်ပြီး ဤလူ့ဘုံ၌ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော သကဒါဂါမ်။
၆။ တတ္ထပတွာ ဣဓနိဗ္ဗတ္တိတွာ တတ္ထပရိနိဗ္ဗာယီ = ထိုနတ်ဘုံ၌ သကဒါဂါမ်ဖြစ်ပြီး ဤလူ့ဘုံ၌ ပဋိသန္ဓေနေ၍ ဤလူ့ပြည်မှတဖန် ထိုနတ်ပြည်သို့ ပြန်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော သကဒါဂါမ်။
သကဒါဂါမိမဂ်သည် နောက်ထပ် ကိလေသာတို့ကို အကြွင်းမဲ့အားဖြင့် မပယ်သော်လည်း ကိလေသာတို့ကို ပို၍ နည်းပါးသွားအောင် လုပ်၏။
တတိယမဂ်ရသော အခိုက်အတန့် ပုဂ္ဂိုလ်ကို အနာဂါမိမဂ္ဂဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ပထမ အနာဂါမိဖိုလ်မှ အရဟတ္တမဂ် မရမီတိုင်အောင် ပုဂ္ဂိုလ်ကို အနာဂါမိဖလဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ခေါ်၏။
အနာဂါမ်ဖြစ်ပြီးက လူ့ပြည်၊ ကာမာဝစရဘုံတို့သို့ ပြန်မလာတော့ဘဲ ဧကန် သုဒ္ဓါဝါသဗြဟ္မာဘုံ၌ ဖြစ်ကာ ရဟန္တာဖြစ်ပြီး ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်၏။
၁။ အန္တရာပရိနိဗ္ဗာယီအနာဂါမ် = သုဒ္ဓါဝါသ ၅-ဘုံတွင် မိမိရောက်ရာဘုံ၏ အသက်အပိုင်းအခြား ရှေ့ထက်ဝက်အတွင်း ရဟန္တာဖြစ်သော အနာဂါမ်။
၂။ ဥပဟစ္စပရိနိဗ္ဗာယီအနာဂါမ် = သုဒ္ဓဝါသ ၅-ဘုံတွင် မိမိရောက်ရာဘုံ၏ အသက်ထက်ဝက်ကို လွန်ပြီးမှ ရဟန္တာဖြစ်သော အနာဂါမ်။
၃။ အသင်္ခါရပရိနိဗ္ဗာယီ = ဆင်းဆင်းရဲရဲ အလွန်လုံ့လမပြုဘဲ ကိလေသပရိနိဗ္ဗာန်ဖြင့် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော အနာဂါမ်။
၄။ သသင်္ခါရပရိနိဗ္ဗာယီ = ဆင်းဆင်းရဲရဲ ငြိုငြင်ပင်ပန်းစွာ အလွန်လုံ့လပြုပြီးမှ ကိလေသပရိနိဗ္ဗာန်ဖြင့် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော အနာဂါမ်။
၅။ ဥဒ္ဓံသောတအကနိဋ္ဌဂါမိအနာဂါမ် = သုဒ္ဓါဝါသ ၅-ဘုံတို့တွင် အောက်အောက်သောဘုံတို့၌ အရဟတ္တမဂ်ကို မရမူ၍ အထက်ဆုံးဖြစ်သော အကနိဋ္ဌဘုံသို့ ရောက်မှ ရဟန္တာဖြစ်သော အနာဂါမ်။
ဥဒ္ဓံသောတအကနိဋ္ဌဂါမိအနာဂါမ်ကို ဤသို့ ခွဲသေး၏။
(က) အဝိဟာဘုံမှ စ၍ အစဉ်အတိုင်း အကနိဋ္ဌဘုံတိုင်အောင် သွား၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော ဥဒ္ဓံသောတ အကနိဋ္ဌဂါမိအနာဂါမ်။
(ခ) အဝိဟာဘုံမှ စ၍ အစဉ်အတိုင်း သုဒဿီဘုံတိုင်အောင် သွား၍ ဥဒ္ဓံသောတ နအကနိဋ္ဌဂါမိအနာဂါမ်။
(ဂ) ဤကာမဘုံမှ အကနိဋ္ဌဘုံသို့ ရောက်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော နဥဒ္ဓံသောတ အကနိဋ္ဌဂါမိအနာဂါမ်။
(ဃ) ဤကာမဘုံမှ သုဒ္ဓါဝါသအောက် ၄-ဘုံသို့ သွား၍ ဖြစ်ရာဘုံ၌ပင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော ဥဒ္ဓံသောတ နအကနိဋ္ဌဂါမိအနာဂါမ်။
အနာဂါမိမဂ်က ကာမရာဂနှင့် ဗျာပါဒကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်၏။
အရဟတ္တမဂ် အခိုက်အတန့်၌ ဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို အရဟတ္တမဂ္ဂဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ပထမ အရဟတ္တဖိုလ်မှ စပြီး ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသည်တိုင်အောင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို အရဟတ္တဖလဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ခေါ်၏။
(၅) ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တရဟန္တာ ဟူ၍ ၅-မျိုး ရှိ၏။
အရဟတ္တမဂ်က အလွန်သိမ်မွေ့သော မာနမှ လွဲ၍ ကျန်ကိလေသာ အားလုံးကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်၏။
ဒိဋ္ဌိဂတဝိပ္ပယုတ် ၄-ခုနှင့် ဥဒ္ဓစ္စသဟဂုတ် ၁-ခု၊ ပေါင်း ၅-ခုကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်၏။
ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အား အာသဝေါတရား ၄-ပါးတို့သည် ကင်းကုန်သောကြောင့် ခီဏာသဝ မည်၏ ဟူ၍လည်းကောင်း၊
အမြတ်ဆုံးသော အလှူကို ခံတော်မူထိုက်သောကြောင့် အဂ္ဂဒက္ခိဏေယျ ဟူ၍လည်းကောင်း သင်္ဂြိုဟ်ကျမ်းတွင် ပြဆို၏။
၁။ ခန္ဓာငါးပါး သင်္ခါရတရားတို့၌ အတ္တဇီဝမှ ဆိတ်သည်ဖြစ်၍ သံယောဇဉ်စသည်တို့မှ လွတ်သော မဂ်သည် သုညတဝိမောက္ခ မည်၏။
၂။ နိစ္စနိမိတ်စသည် မရှိသည်ဖြစ်၍ သံယောဇဉ်စသည်မှ လွတ်သော မဂ်သည် အနိမိတ္တဝိမောက္ခ မည်၏။
၃။ တဏှာတည်းဟူသော တောင့်တခြင်း ကင်းသည်ဖြစ်၍ သံယောဇဉ်စသည်တို့မှ လွတ်သော မဂ်သည် အပ္ပဏီဟိတဝိမောက္ခ မည်၏။
၁။ ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ အတ္တမှ ဆိတ်သည်ကို အဖန်တလဲလဲ ရှုခြင်းပညာသည် သုညတာနုပဿနာ မည်၏။
၂။ ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ နိစ္စနိမိတ် မရှိခြင်းကို အဖန်တလဲလဲ ရှုခြင်းပညာသည် အနိမိတ္တာနုပဿနာ မည်၏။
၃။ ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ တဏှာတည်းဟူသော တောင့်တခြင်း ကင်းသည်ကို အဖန်တလဲလဲ ရှုဆင်ခြင်ခြင်းပညာသည် အပ္ပဏီဟိတာနုပဿနာ မည်၏။
မဂ်နှင့်ဖိုလ်သည် အတ္တာဘိနိဝေသစသော ဆန့်ကျင်ဘက် ကိလေသာဟု ဆိုအပ်သော ဆန့်ကျင်ဘက်မှ လွတ်တတ်သောကြောင့် ဝိမောက္ခ မည်၏။
အဖန်တလဲလဲ ရှုသော ဝိပဿနာဉာဏ်သည် လောကုတ္တရာမဂ်ဖိုလ်ရခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော ဝိမောက္ခမုခ မည်၏။
အဘိဓမ္မာသင်တန်းပြီးသော် လောကချမ်းသာ စနေနေ့ ဆည်းဆာတရားပွဲကို အရှင်စက္ကိန္ဒက “နတ်တို့မှာတမ်း စကားဆန်း”ဟူသော တရားတော် ပထမပိုင်းကို ဟောကြား ချီးမြှင့်၏။
ဣတိဝုတ်ပါဠိတော် ပဉ္စပုဗ္ဗနိမိတ်သုတ်တော်ကို ဟောကြားခြင်းဖြစ်ရာ၊ စုတေခါနီး နတ်အား မှာကြားသည့် စကားသုံးခုအနက် -
၁။ ဣတော ဘော သုဂတိ ဂစ္ဆ = ဤနတ်ပြည်လောက နတ်ဘဝက စုတေလျှင် သုဂတိဘဝသို့ ရောက်အောင် သွားပါ။
(နတ်ပြည်ဘဝ၊ စုတေက၊ သုဂတိသို့ သွားပါလေ။)
၂။ သုဂတိ ဂန္တွာ သုလဒ္ဓ လာဘံ လဘ = သုဂတိဘုံဘဝသို့ ရောက်လျှင် အကောင်းဆုံး ရတနာများကို ရအောင် ယူပါ။
(သုဂတိမှာ၊ ရသင့်တာ၊ ရတနာများ ရပါစေ။)
မှာတမ်း စကား ၂-ခုကို ရှင်းလင်း ဟောကြားပြီး၊ ၁၀-မိနစ်မျှ တရားရှုမှတ် ပွားများကြကာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို အမျှပေးဝေကြ၏။
Posted by LokaChantha at 2:56 PM 1 comment:
၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက် စနေနေ့တွင် နယူးယောက်မြို့ လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်း၌ အပတ်စဉ် အဘိဓမ္မာသင်တန်းကို ဆက်လက် သင်ကြား ပို့ချရာ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ အဘိဓမ္မာသင်တန်း၏ နောက်ဆုံး သင်ခန်းစာများအဖြစ် အပတ်စဉ် ၅၅ နှင့် ၅၆ - ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်းဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာ ပို့ချချက်များကို နာယူ သင်ယူ မှတ်သားကြရ၏။
ရှေးဦးစွာ လောကချမ်းသာဆရာတော်က သင်ကြားမည့် သင်ခန်းစာမိတ်ဆက် အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်း သင်ပြ၏။
ဝိပဿနာအားထုတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဝိသုဒ္ဓိ ၇-ပါး အစဉ်အတိုင်း သွားရ၏။
သီလဝိသုဒ္ဓိဖြင့် သီလကို စင်ကြယ်စေရ၏။
စိတ္တဝိသုဒ္ဓိဖြင့် သမာဓိရအောင် အားထုတ်ရ၏။
ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြင့် နာမ်ရုပ်တို့ကို ပိုင်းခြား သိရ၏။
ဤအဆင့်၌ ဝိပဿနာ၏ အခြေခံ ‘နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်’ ဖြစ်၏။ နာမ်ရုပ်ကွဲခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး အနိစ္စ, ဒုက္ခ, အနတ္တ ရှုမြင်ခြင်း မရှိသေး၍ သင်္ဂြိုဟ်၌ ဤနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကို ဝိပဿနာဉာဏ်ထဲ ထည့်၍ မပြချေ။
ကင်္ခါဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိ၌ နာမ်ရုပ်တို့၏ အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေ သိမြင်၏။
အကြောင်းကိုသိသော ဉာဏ်ပေါ်၏။ ထိုဉာဏ်ကို ‘ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဉာဏ်’ဟု ခေါ်၏။ ဤဉာဏ်ကိုလည်း ဝိပဿနာဉာဏ်ထဲ ထည့်၍ မပြသေးပါ။
အကြောင်းကို ရှုမြင်ခြင်းသာ ရှိပြီး အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ ရှုမြင်မှု မရှိသေးသောကြောင့် ဖြစ်၏။
ဤကဲ့သို့ အကြောင်းအကျိုး သိမြင်၍ နောက်က ရှိခဲ့သော ယုံမှား သံသယတို့သည် အခိုက်အတန့်အားဖြင့် ပျောက်၏။
ယုံမှား သံသယတို့ကို ပယ်သော စိတ်၏ စင်ကြယ်ခြင်း = ကင်္ခါဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိ ဖြစ်၏။
ဝိပဿနာတရား အားထုတ်သူအတွက် ဤအဆင့်၌ နာမ်ရုပ်ကွဲ၊ အကြောင်းကို သိမ်းဆည်း ဆင်ခြင်၊ ခဏိကသမာဓိရသဖြင့် စူဠသောတာပန်=သောတာပန်အငယ်စားဟု ခေါ်ရ၏။
ဤအဆင့်မှ ဆက်ပြီး အားထုတ်သော် ခန္ဓာငါးပါး သင်္ခါရတရားတို့ကို အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တအားဖြင့် သုံးသပ်သော အစွမ်းဖြင့် ဖြစ်စေသောဉာဏ် = သမ္မသနဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်၏။
သင်္ဂြိုဟ်၌ ဝိပဿနာဉာဏ်များကို ဤသမ္မသနဉာဏ်မှ စ၍ ပြဆို၏။
ဆက်ပြီး အားထုတ်သော် ဝိပဿနာဉာဏ် ၁၀-ပါး အဆင့်ဆင့် တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်၏။
၃။ ဘင်္ဂဉာဏ် = ခန္ဓာငါးပါး သင်္ခါရတရားတို့၏ ပျက်ခြင်းတစ်ပါးကိုသာ အဖန်တလဲလဲ ရှုသောဉာဏ်။
၄။ ဘယဉာဏ် = ပျက်ခြင်း၏ အစွမ်းဖြင့်ဖြစ်သော ခန္ဓာငါးပါး သင်္ခါရတရားတို့ကို အလွန်ကြောက်လန့်ဖွယ် ဘေးကြီးဟု အဖန်တလဲလဲ ရှုသောအစွမ်းဖြင့် ဖြစ်သောဉာဏ်။
၅။ အာဒီနဝဉာဏ် = ဘေးကြီးဟု မြင်အပ်ပြီး ထင်အပ်ပြီးသော ခန္ဓာငါးပါး သင်္ခါရတရားတို့ကို အပြစ်အားဖြင့် ရှုသောဉာဏ်။
၆။ နိဗ္ဗိဒါဉာဏ် = အပြစ်ဟု မြင်အပ်ပြီး ထင်အပ်ပြီးသော ခန္ဓာငါးပါး သင်္ခါရတရားတို့၌ ငြီးငွေ့သောအစွမ်းဖြင့် ဖြစ်သောဉာဏ်။
၇။ မုဉ္စိတုကမျတာဉာဏ် = ငြီးငွေ့၍ ထိုခန္ဓာငါးပါး သင်္ခါရတရားတို့မှ လွတ်မြောက်ခြင်းငှာ အလိုရှိသည်၏ အစွမ်းဖြင့် ဖြစ်သောဉာဏ်။
၈။ ပဋိသင်္ခါဉာဏ် = သင်္ခါရတို့မှ လွတ်မြောက်ခြင်း၏ အကြောင်း၏ ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ တဖန် ခန္ဓာငါးပါး သင်္ခါရတရားတို့ကို သိမ်းဆည်းခြင်းအစွမ်းဖြင့် ဖြစ်သောဉာဏ်။
၉။ သင်္ခါရုပေက္ခာဉာဏ် = ခန္ဓာငါးပါး သင်္ခါရတရားတို့၌ ကြောက်ခြင်း နှစ်သက်ခြင်းမှ ကင်းသည်၏အစွမ်းဖြင့် လျစ်လျူရှု၍ ဖြစ်သောဉာဏ်။
၁၀။ အနုလောမဉာဏ် = အနိစ္စ အစရှိသော လက္ခဏာကို ရှုသည်၏ အဖြစ်ဖြင့် အောက်၌ဖြစ်သော ဝိပဿနာဉာဏ် ၉-ပါးတို့အားလည်းကောင်း၊ အထက်၌ ၃၇-ပါးသော ဗောဓိပက္ခိယတရားတို့နှင့် လျော်သော (ဝါ) မဂ်ဖြစ်ခြင်းငှာ လျော်သောဉာဏ်။
ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ် ရင့်သန်သောအခါ ဝိပဿနာ၏ ဘေးရန် ‘ဝိပဿနုပတ္တိလေသ’ ၁၀-ပါး ဖြစ်ပေါ်လာတတ်၏။
၁။ သြဘာသ = ရုပ်နာမ်တို့၏ အဖြစ်အပျက်ကို ရှင်းလင်းစွာ သိမြင်သောအခါ လွန်စွာ စိတ်ကြည်လင်ရကား ကိုယ်မှ အရောင်အလင်းတို့သည် ထွက်ဖြာကုန်၏။
၂။ ပီတိ = သြဘာသ,သာမကသေး ခုဒ္ဒကာပီတိစသော ၅-ပါးသော ပီတိမျိုးလည်း ဖြစ်ပေါ်၍ နှစ်သက်၏။
၃။ ပဿဒ္ဓိ = ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံး အေးမြငြိမ်းချမ်းသဖြင့် ကာယပဿဒ္ဓိ စိတ္တပဿဒ္ဓိ ဖြစ်၏။
၄။ အဓိမောက္ခ = ကမ္မဋ္ဌာန်းအာရုံ၌ သက်ဝင်ဆုံးဖြတ်သော သဒ္ဓါတရားလည်း ဖြစ်ပေါ်၏။
၅။ ပဂ္ဂဟ = ဝိပဿနာစိတ်ကို နောက်မဆုတ်ရအောင် အားပေး ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့တတ်သော ဝီရိယလည်း ဖြစ်ပေါ်၏။
၆။ သုခ = တစ်ကိုယ်လုံး၌ စိတ္တဇရုပ်များကို ပျံ့နှံ့ထုံမွှမ်းစေတတ်သော သုခဝေဒနာလည်း ဖြစ်၏။
၇။ ဉာဏ = သွက်လက်လျင်မြန် အမြင်သန်သော ဝိပဿနာဉာဏ်လည်း ဖြစ်ပေါ်၏။
၈။ ဥပဋ္ဌာန = မြင့်မိုရ်တောင်ပမာ ကမ္မဋ္ဌာန်းအာရုံ၌ လွန်စွာ တည်တံ့သော သတိလည်း ဖြစ်၏။
၉။ ဥပေက္ခာ = အဖြစ်အပျက်ကို ရှုရန် ဗျာပါရ မပြုရတော့ဘဲ အသင့်အားဖြင့် ရှုနိုင်သော ဝိပဿနာဉာဏ်နှင့် ယှဉ်သော တတြမဇ္ဈတ္တုပေက္ခာမည်သော ဝိပဿနုပေက္ခာ၊ ထိုဖြစ်ပျက်မှုကို ဆင်ခြင်လိုသည့်အခါ ဆင်ခြင်နိုင်သော အာဝဇ္ဇနုပေက္ခာဟူသော ဥပေက္ခာ ၂-မျိုးလည်း ဖြစ်၏။
၁၀။ နိကန္တိ = သြဘာသစသည်တို့ဖြင့်ဖြစ်သော ဝိပဿနာကို သာယာ နှစ်သက်နေတတ်သော တဏှာလည်း ဖြစ်၏။
ထို ဆိုခဲ့ပြီးသော သြဘာသ၊ ပီတိ စသည်တို့ ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ ထိုအရောင်အဝါ စသည်တို့ကို သာယာသော တဏှာနိကန္တိအတွက် ငါမဂ်ရပြီဟု အထင်မှားနေတတ်၏။
ထိုသို့ အထင်မှားခြင်းကို ဤကား မဂ်မဟုတ်သေးဟူ၍ ပိုင်းခြား ဆုံးဖြတ်နိုင်သော သဘောသည် မဂ္ဂါမဂ္ဂဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ မည်၏။
ဝိပဿနုပတ္တိလေသတို့မှ လွတ်ပြီးသော ယောဂီသည် ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ်မှ စ၍ အနုလောမဉာဏ်တိုင်အောင် ဝိပဿနာဉာဏ် ၉-ပါးကို အစဉ်အတိုင်း တဖန် ထူထောင်၍ လက္ခဏာယာဉ် ၃-ပါးကို ပွားများ အားထုတ်ပြန်ရာ ထိုဉာဏ် ၉-ပါးကို ပိုင်သော ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏ ဝိပဿနာဉာဏ် ၉-ပါးသည် သိတတ် မြင်တတ်သောကြောင့် ဉာဏဒဿန မည်၏။
ထိုဉာဏဒဿနမည်သော ဝိပဿနာဉာဏ် ၉-ပါးသည်ပင် နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်စေတတ်သော အကျင့်မြတ်ဖြစ်သောကြောင့် ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ မည်၏။
ဝုဋ္ဌာနဂါမိနီ ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုသည်မှာ ဝိပဿနာ၏ အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်သော အနုလောမဉာဏ်နှင့်တကွ သင်္ခါရုပေက္ခာဉာဏ်ကို အပါယ်စသည်မှလည်းကောင်း, သင်္ခါရနိမိတ်မှလည်းကောင်း ထွက်မြောက်၍ မဂ်သို့ရောက်ကြောင်း ဖြစ်သောကြောင့် ဝုဋ္ဌာနဂါမိနီဝိပဿနာဟု ခေါ်၏။
သင်္ခါရုပေက္ခာဉာဏ်, အနုလောမဉာဏ်ဟု ဆိုအပ်သော ဝုဋ္ဌာနဂါမိနီဝိပဿနာဉာဏ် ထက်သန်လာသောအခါ သစ္ဆိကရဏကိစ္စဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကို ကိုယ်တိုင် ပေါက်ရောက်၍ မဂ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထိုမဂ်ဉာဏ်သည် ဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ မည်၏။
ဘဝင်္ဂစလန၊ ဘဝင်္ဂုပစ္ဆေဒ၊ မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်း၊ ပရိကံ၊ ဥပစာ၊ အနုလုံ၊ ဂေါတြဘူ၊ မဂ်၊ ဖိုလ်၊ ဖိုလ်၊ ဘဝင်
မဂ္ဂဝီထိကို ဝီထိပိုင်းတွင် လေ့လာခဲ့ပြီး ဖြစ်၏။
မဂ်ရခါနီးအခါ ဝိပဿနာဉာဏ်သည် သွက်သွက်လက်လက် ဖြစ်လာ၏။ သင်္ခါရတရားက ထတော့မည့်အချိန်ဖြစ်၍ အားကောင်းလာ၏။ သင်္ခါရုပေက္ခာဉာဏ်အပါအဝင် ဤအခိုက်အတန့်ကို ‘ဝုဋ္ဌာနဂါမိနီဝိပဿနာဉာဏ်’ဟု ခေါ်၏။
မဂ္ဂဝီထိတွင်ပါသော ပရိကံ၊ ဥပစာ၊ အနုလုံ၊ ဂေါတြဘူတို့မှာ ဉာဏသမ္ပယုတ်ကာမာဝစရကုသိုလ်ဇောတစ်ကြိမ်စီ ဖြစ်၏။
ပရိကံ၊ ဥပစာ၊ အနုလုံ ဤသုံးခုကို အနုလောမဉာဏ်ဟု ခေါ်၏။ သင်္ခါရုပေက္ခာဉာဏ် ရင့်သန်ပြီး မဂ်ရခါနီး ပေါ်သောဉာဏ် ဖြစ်၏။
ဂေါတြဘူမှာ ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းတွင် ကျရောက်နေသော်လည်း မည်သည့် ဝိသုဒ္ဓိထဲမှာမှ မပါဝင်။
ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိထဲလည်း မပါ၊ ဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိထဲလည်း မပါဝင်။
အမှန်မှာ ဂေါတြဘူသည် ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းထဲ ကျနေသဖြင့် ဝိပဿနာဟု ခေါ်ရသော်လည်း တကယ့် ဝိပဿနာအစစ် မဟုတ်ပေ။
ဝိပဿနာသည် သင်္ခါရတရား ရုပ်နာမ်တရားကို အာရုံပြု၏။
ဂေါတြဘူက နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြု၏။ ကာမာဝစရစိတ်ထဲ၌ နိဗ္ဗာန်ကို တိုက်ရိုက် အာရုံပြုသည်မှာ ဤတစ်ခု (ဂေါတြဘူ)သာ ရှိ၏။
အနုလောမဉာဏ် ဖြစ်ပြီးနောက် ဂေါတြဘူဉာဏ် (ပုထုဇဉ်အနွယ်ကို ဖြတ်တောက်၍ အရိယာအနွယ်သို့ ရောက်စေသောဉာဏ်) ပေါ်၏။
ဂေါတြဘူနောက် ဆက်ပြီး မဂ်စိတ်ပေါ်၏။ မဂ်ဉာဏ်ဖြစ်၏။ မဂ်စိတ်သည် နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြု၏။
ဤမဂ်စိတ်ကို ဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိဟု ခေါ်၏။
မဂ်စိတ်နောက် ဖိုလ် ၂-ကြိမ် ၃-ကြိမ် ဖြစ်၏။ ဖိုလ်က မည်သည့်ဝိသုဒ္ဓိထဲမှ မပါ။
မဂ်ဖိုလ်ဖြစ်ပြီးနောက် ဘဝင်ကျသွားကာ ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ် ပေါ်၏။ ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်မှာ မဂ်ကို ဆင်ခြင်သောဉာဏ်၊ ဖိုလ်ကို ဆင်ခြင်သောဉာဏ်၊ နိဗ္ဗာန်ကို ဆင်ခြင်သောဉာဏ် ဖြစ်၏။
မဂ်ကို ဆင်ခြင်သော ပစ္စဝေက္ခဏာ၊ ဖိုလ်ကို ဆင်ခြင်သော ပစ္စဝေက္ခဏာ၊ နိဗ္ဗာန်ကို ဆင်ခြင်သော ပစ္စဝေက္ခဏာ၊ ပယ်အပ်ပြီးသော ကိလေသာကို ဆင်ခြင်သော ပစ္စဝေက္ခဏာ၊ ကျန်သေးသော ကိလေသာကို ဆင်ခြင်သော ပစ္စဝေက္ခဏာ - ပစ္စဝေက္ခဏာ ၅-မျိုး ထိုက်သင့်သလို ဖြစ်၏။
မဂ်ဖြစ်သောအခါ မဂ်ကိစ္စ ၄-ချက်ကို တပြိုင်နက် ပြုပြီး ဖြစ်၏။
မဂ်ကိစ္စ ၄-ချက်မှာ ဆီမီးနှင့် တူ၏။
ဆီမီးသည် “မီးစာကိုလောင်၊ အမှောင်ပယ်ရှင်း၊ အလင်းရောင်စွမ်း၊ ဆီခန်းစေမှု” ကိစ္စ ၄-ခုကို တပြိုင်တည်း ပြုသကဲ့သို့၊
မဂ်သည် (၁) ဒုက္ခသစ္စာကို ပိုင်းပိုင်းခြားခြား သိခြင်း၊ (၂) သမုဒယသစ္စာကို ပယ်ခြင်း၊ (၃) နိရောဓသစ္စာ(နိဗ္ဗာန်)ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်း၊ (၄) မဂ္ဂသစ္စာကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း ကိစ္စ ၄-ခုကို မဂ်အခိုက်အတန့်မှာ တပြိုင်နက် ပြီးစေ၏။
မဂ်စိတ်ဖြစ်သောအခါ မဂ်ဉာဏ်က ကိလေသာများကို နောက်ထပ် ပြန်မပေါ်အောင် ပယ်၏။
ဖိုလ်စိတ်ဖြစ်သောအခါ ဖိုလ်က တဖန်ငြိမ်းစေသောအားဖြင့် ကိလေသာကို ပယ်သတ်၏။
ဤနည်းဖြင့် ပထမမဂ်, ဒုတိယမဂ်, တတိယမဂ်, စတုတ္ထမဂ် အဆင့်ဆင့်၊ ဆိုင်ရာကိလေသာတို့ကို နောင်ဘယ်တော့မှ မပေါ်အောင် အပြီးတိုင် ပယ်သတ်လေတော့၏။
Posted by LokaChantha at 2:55 PM No comments:
Posted by LokaChantha at 11:21 AM No comments:
(၁) သမထကမ္မဋ္ဌာန်းနှင့် (၂) ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတို့ ဖြစ်သည်။
ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်း = တေဘူမကသင်္ခါရတရားတို့ကို လက္ခဏာယာဉ်သုံးပါးဖြင့် အဖန်ဖန် ရှုဆင်ခြင်ခြင်း။
ပဿနာ = ရှုမြင်ခြင်း
ဝိပဿနာ = အမျိုးမျိုးသိအောင် အားထုတ်ခြင်း။
ဝိပဿနာ ရှုမှတ် ပွားများ အားထုတ်ပြီး အောင်မြင်ကာ အဆုံးသို့ရောက်လျှင် တရားထူး မဂ်ဖိုလ် ရ၏။
သမထကမ္မဋ္ဌာန်းနှင့် ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်း ၂-မျိုးရှိရာတွင် သုတ္တန်များ၌ သမထကနေ ဝိပဿနာသို့ သွားသည်ကို ဟောကြားခြင်း များ၏။
ဝိပဿနာသက်သက် ဟောကြားခြင်း နည်းပါး၏။
မဂ်ဖိုလ်ရအောင် အားထုတ်ရာ၌ သမထယာနိကနည်းနှင့် ဝိပဿနာယာနိကနည်းဟူ၍ ၂-မျိုး ရှိ၏။
ဈာန်ရအောင် အားမထုတ်တော့ဘဲ ဝိပဿနာကိုပင် စ,စချင်း ရှုမှတ် ပွားများ အားထုတ်ကာ ဝိပဿနာသမာဓိ (ခဏိကသမာဓိ) ရပြီး၊ ဝိပဿနာညာဏ် အဆင့်ဆင့် တက်၍ မဂ်ဖိုလ်ရအောင် အားထုတ်သောနည်း ဖြစ်၏။
ရာဂ အသုဘ ၁၀-ပါး၊ ကာယဂတာသတိ ၁၁
၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက် စနေနေ့ လောကချမ်းသာ ဆည်းဆာတရားပွဲကို အရှင်စက္ကိန္ဒက ဟောကြား ချီးမြှင့်ရာ သိကြားမင်း ရှိခိုးခံရသူများအကြောင်း မှတ်သား နာယူကြရလေသည်။
Posted by LokaChantha at 2:27 PM No comments:
၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက် စနေနေ့၊ နယူးယောက်မြို့ လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်း၊ အပတ်စဉ် စနေနေ့ အရှင်သီလာနန္ဒာဘိဝံသ၏ အဘိဓမ္မာသင်တန်းပို့ချချက်များသင်တန်း၌ သင်တန်းပို့ချချက်အပတ်စဉ် (၅၁) ပစ္စည်းပိုင်း-ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၌ ပဋ္ဌာန်းနည်း နှင့် သင်တန်းပို့ချချက်အပတ်စဉ်(၅၂) ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း-၁ သင်ခန်းစာများကို သင်ကြား ပို့ချသွားပြီး၊ လောကချမ်းသာ စနေနေ့ ဆည်းဆာတရားပွဲကို အရှင်စက္ကိန္ဒက ဟောကြား ချီးမြှင့်သွားခဲ့၏။
ဟေတုပစ္စည်း ကျေးဇူးပြုပုံ ပုံစံ
ဟေတုပစ္စည်းတွင် ဟိတ် ၆-ပါးသည် ပစ္စည်းတရားဖြစ်ရာ ဟိတ်ပါသော စိတ်များကို ပုံစံထုတ်ပြနိုင်၏။
ပုံစံအဖြစ် “လောဘမူပထမစိတ်”ကို ထုတ်ဆောင်ပြရသော် - ပထမ လောဘမူစိတ် ဖြစ်သောအခါ ‘လောဘမူပထမစိတ်’၊ ‘၎င်းနှင့် ယှဉ်သော စေတသိက် ၁၉-ခု’၊ ‘စိတ္တဇရုပ်’တို့ တပြိုင်နက် ဖြစ်ကြရာ စေတသိက်ထဲတွင် ပါဝင်သော ‘လောဘစေတသိက်’ကို ‘ပစ္စည်း’ယူထားလျှင် ‘လောဘမူပထမစိတ်’၊ ‘ကျန်စေတသိက် ၁၈-ခု’၊ ‘စိတ္တဇရုပ်’တို့သည် ‘ပစ္စယုပ္ပန်’ဖြစ်၏။ ‘မောဟ’ကို ပစ္စည်းအဖြစ် ယူထားက ‘လောဘမူစိတ်’၊ ‘ကျန်စေတသိက် ၁၈-ခု’၊ ‘စိတ္တဇရုပ်’တို့သည် ‘ပစ္စယုပ္ပန်’ဖြစ်၏။
ပစ္စည်းဘက်၌ ‘လောဘ’၊ ‘ဒေါသ’၊ ‘မောဟ’၊ ‘အလောဘ’၊ ‘အဒေါသ’၊ ‘အမောဟ’ ဟိတ်တစ်ပါးပါးသော်လည်းကောင်း ရှိရပြီး၊ ပစ္စယုပ္ပန်ဘက်၌ ‘စိတ်’၊ ‘အခြားစေတသိက်များ(လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ .. ပြန်ပါနိုင်၏။)၊ ‘စိတ္တဇရုပ်’တို့ ပါရှိရ၏။
ဟေတုပစ္စည်းသည် “သဟဇာတမျိုး”ထဲတွင် ပါသောကြောင့် ပစ္စည်းနှင့် ပစ္စယုပ္ပန်တို့သည် အတူတကွ ဖြစ်၏။
‘အလောဘ’၊ ‘အဒေါသ’၊ ‘အမောဟ’တို့ပါသော မဟာကုသိုလ်ပထမစိတ်ကို ပုံစံပြရသော် - ‘အလောဘ’ကို ပစ္စည်းဟု ယူလျှင် ‘မဟာကုသိုလ်ပထမစိတ်’၊ ကျန် ၎င်းနှင့်ယှဉ်သော စေတသိက် ၃၇’၊ ‘စိတ္တဇရုပ်’တို့သည် ပစ္စယုပ္ပန် ဖြစ်၏။
ဟေတုသမ္ပယုတ္တကာနံ ဓမ္မာနံ = ဟိတ်နှင့်ယှဉ်သော တရားများ (စိတ်, စေတသိက်)၊
တံသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ = ထိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော ရုပ်များသည်
ဟေတုပစ္စယေန ပစ္စယော = ဟေတုပစ္စည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ထို့အတူ အခြား အာရမ္မဏပစ္စည်း၊ အဓိပတိပစ္စည်း စသည်တို့ကို ရှင်းပြနိုင်ရန် သင်ယူ လေ့လာခဲ့ပြီးသော စိတ်၊ စေတသိက်၊ ရုပ် .. စသည်တို့ကို ပြန်လည် အမှတ်ရ နားလည်ရန် လို၏။
ဥပမာ - အဓိပတိပစ္စည်းကို ရှင်းပြနိုင်ရန် အဓိပတိပစ္စည်း၏ ပစ္စည်း၊ ပစ္စယုပ္ပန်ကို နားလည်ရ၏။
အဓိပတိတပ်သော တရားလေးပါး (ဆန္ဒ၊ ဝီရိယ၊ စိတ်၊ ပညာ) အနက် ဆန္ဒကို ပြောလိုက ဆန္ဒနှင့်ယှဉ်သော စိတ်များကို ကြည့်ပြီး ပုံစံ ထုတ်ယူပြောနိုင်၏။
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်း၌ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်ခြင်းကို ပြောဆို၏။ ပစ္စည်းနှင့် ပစ္စယုပ္ပန်ကိုသာ ပြ၏။
အကြောင်းက အကျိုးကို အဘယ်သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည်ကို ပြဆိုခြင်း မရှိပေ။
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့် ဟပ်ပြီး နားလည်မှ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် နားလည်၏။
အဝိဇ္ဇာဆိုသည်မှာ မောဟ ဖြစ်၏။
သင်္ခါရကို ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၌ ‘ပုညာဘိသင်္ခါရ’၊ ‘အပုညာဘိသင်္ခါရ’၊ ‘အာနဉ္စာဘိသင်္ခါရ’ဟု ၃-မျိုး အရကောက်၏။
ပုညာဘိသင်္ခါရ = ကာမာဝစရကုသိုလ်၊ ရူပါဝစရကုသိုလ်
အပုညာဘိသင်္ခါရ = အကုသိုလ်
အာနဉ္စာဘိသင်္ခါရ = အရူပါဝစရကုသိုလ်
အဝိဇ္ဇာက ပုညာဘိသင်္ခါရကို ကျေးဇူးပြုပုံ
အဝိဇ္ဇာသည် ကုန်တတ်သော သဘောတရား၊ ပျက်တတ်သော သဘောတရားဟု ရှုသောအခါ ရှုသောပုဂ္ဂိုလ်၏ သန္တာန်၌ ကာမာဝစရကုသိုလ်စိတ် ဖြစ်၏။
အဝိဇ္ဇာက ထိုကာမာဝစရကုသိုလ်စိတ်နှင့် အတူဖြစ်သော သင်္ခါရ(ကံ)ကို အာရမ္မဏသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
အဝိဇ္ဇာက ‘အာရုံ’၊ ကုသိုလ်သင်္ခါရက ‘အာရမ္မဏိက’=‘အာရုံကို ယူသောတရား’ ဖြစ်၏။
တစ်ဖန် စေတောပရိယ(သူတပါး၏စိတ်ကို သိနိုင်ခြင်း)၊ ပုဗ္ဗေနိဝါသ (ရှေးဘဝများကို ပြန်၍ သိနိုင်ခြင်း)၊ အနာဂတံသ (အနာဂတ်ကို မြင်နိုင်ခြင်း)ဉာဏ်ဟု ဆိုအပ်သော အဘိဉာဏ်တို့နှင့် ယှဉ်သောစိတ်ဖြင့် မိမိ၊ သူတပါးတို့၌ မောဟနှင့်တကွ ဖြစ်သော စိတ်ကို သိသောကာလ၌ ရူပါဝစရကုသိုလ်(ပုညာဘိသင်္ခါရ)အား အာရမ္မဏပစ္စည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ထိုမှတပါး အဝိဇ္ဇာ၏ အပြစ်ကို မြင်ခြင်းကြောင့် အဝိဇ္ဇာမှ ကင်းလွတ်ရန် ဝဋ်ကင်းရာ နိဗ္ဗာန်ကို တောင့်တသဖြင့် ကောင်းမှုကုသိုလ် ပြုကျင့်သူတို့အားလည်းကောင်း၊ ရူပါဝစရဈာန်ရအောင် အားထုတ်သူတို့အားလည်းကောင်း ထို(ကာမ၊ ရူပ)ပုညာဘိသင်္ခါရတို့အား ဥပနိဿယပစ္စည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ထို့အတူပင် ဘဝ၏အပြစ်ကို ဖုံးကွယ်တတ်သော အဝိဇ္ဇာဖြင့် ပြင်းစွာ တွေဝေသောကြောင့် ကာမဘဝစည်းစိမ်ချမ်းသာ၊ ရူပဘဝစည်းစိမ်ချမ်းသာတို့ကို တောင့်တ၍ ထိုပုညာဘိသင်္ခါရ ၂-မျိုးတို့ကိုပင်လျှင် ပြုသောသူအေား ဥပနိဿယပစ္စည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
အဝိဇ္ဇာက အပုညာဘိသင်္ခါရကို ကျေးဇူးပြုပုံ
မောဟက အကုသိုလ်ကို ကျေးဇူးပြုသောအခါ သတ္တိအများအပြားဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ကုသိုလ်(ပုညာဘိသင်္ခါရ)၌ပြခဲ့သည့် အာရမ္မဏ၊ ဥပနိဿယတို့ဖြင့်လည်း ကျေးဇူးပြု၏။
အဝိဇ္ဇာသည် အဝိဇ္ဇာကို အာရုံပြုပြီး ရာဂဖြစ်နိုင်၏။ ထိုအခါ အာရမ္မဏပစ္စည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
သာမညအာရုံပြုသည်မျိုး မဟုတ်ဘဲ ပြင်းပြင်းပြပြ အာရုံပြုသောအခါ အာရမ္မဏဓိပတိပစ္စည်း၊ အာရမ္မဏူပနိဿယပစ္စည်းတို့ဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
အဝိဇ္ဇာဖြင့် ပြင်းစွာတွေဝေလျက် အပြစ်မမြင်သည်ဖြစ်၍ သူ့အသက်သတ်ခြင်း စသည်တို့ကို ပြုသောသူအား ဥပနိဿယပစ္စည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ မောဟက ဒေါသမူစိတ်မှာ ယှဉ်သော စေတနာကို ဥပနိဿယပစ္စည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
လောဘဇော, ဒေါသဇော, မောဟဇော အကုသိုလ်ဇောတစ်ခုခု စောသောအခါ ပထမဇောက ဒုတိယဇော၊ ဒုတိယဇောက တတိယဇော၊ ....၊ ဆဋ္ဌမဇောက သတ္တမဇောနှင့် အတူတကွဖြစ်သော အကုသိုလ်သင်္ခါရကို အနန္တရ၊ သမနန္တရ၊ အနန္တရူပနိဿယ၊ အာသေဝန၊ နတ္ထိ၊ ဝိဂတပစ္စည်းများဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
(ဇောခုနစ်ကြိမ်စောပြီးနောက် တဒါရုံ၊ ဘဝင်တို့မှာ အကုသိုလ်မဟုတ်တော့၍ မသက်ဆိုင်တော့ပေ။)
အမှတ်မရှိ တစ်စုံတစ်ခုသော အကုသိုလ်ကို ပြုသောသူအား၊ အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သောအခါ မောဟက ထိုစိတ်နှင့်အတူတကွဖြစ်သော သင်္ခါရ(စေတနာ)ကို ဟေတု၊ သဟဇာတ၊ အညမည၊ နိဿယ၊ သမ္ပယုတ္တ၊ အတ္ထိ၊ အဝိဂတပစ္စည်းများဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
အတူတကွဖြစ်လျှင် သဟဇာတ၊ အညမည၊ နိဿယ၊ အတ္ထိ၊ အဝိဂတတို့ ရရန် သေချာ၏။ သမ္ပယုတ္တမှာ နာမ်,နာမ်ချင်းဆိုလျှင် ရ၏။ နာမ်နှင့်ရုပ်ဆိုလျှင် သမ္ပယုတ္တ မရ။ ဟေတု၊ အဓိပတိစသည်လည်း ရ၏။
အဝိဇ္ဇာက အဘိသင်္ခါရ(အာနေဉ္စာဘိသင်္ခါရ)ကို ကျေးဇူးပြုပုံ
အရူပါဝစရကုသိုလ်နှင့်အတူဖြစ်သော စေတနာ သင်္ခါရအား အဝိဇ္ဇာက ဥပနိဿယပစည်းတစ်မျိုးတည်းဖြင့်သာ ကျေးဇူးပြု၏။
ဤကဲ့သို့ ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့် ယှဉ်ပြီး ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို နားလည်သောအခါ အဝိဇ္ဇာကြောင့် သင်္ခါရဖြစ်ရာ၌၊ အဝိဇ္ဇာက သင်္ခါရကို ကျေးဇူးပြုရာ၌ တခါတရံ အတူတူဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးပြု၏။ တခါတရံ အတူတူမဟုတ်ဘဲ အာရုံပြုခံရသောအနေဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ တခါတရံ လွှမ်းမိုးသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ဤသို့ အဝိဇ္ဇာကို အကြောင်းပြုပြီး သင်္ခါရ တခါတရံ အတူတကွ ဖြစ်ခြင်း၊ တခါတရံ အဝိဇ္ဇာက တစ်ချိန်မှာ ဖြစ်၍ သင်္ခါရက တစ်ချိန်မှာ ဖြစ်ခြင်း စသော အကြောင်း-အကျိုးဖြစ်ပုံ အမျိုးမျိုးကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နားလည်နိုင်၏။
သင်္ခါရက ဝိညာဏ်ကို ကျေးဇူးပြုသောအခါ နာနာက္ခဏိကကမ္မ၊ ဥပနိဿယ ပစ္စည်း ၂-မျိုးတို့ဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ဝိညာဏ်က နာမ်ရုပ်ကို ကျေးဇူးပြုသောအခါ သဟဇာတ၊ အညမည၊ နိဿယ၊ သမ္ပယုတ္တ၊ ဝိပါက၊ အာဟာရ၊ ဣန္ဒြိယ၊ အတ္ထိ၊ အဝိဂတပစ္စည်းတို့ဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
နာမ်ရုပ်က သဠာယတနကို ကျေးဇူးပြုသောအခါ သဟဇာတ၊ အညမည၊ နိဿယ၊ သမ္ပယုတ္တ၊ ဝိပါက၊ အတ္ထိ၊ အဝိဂတ၊ ဟေတု၊ အာဟာရ၊ ပစ္ဆာဇာတ၊ ဝိပ္ပယုတ္တ၊ ဣန္ဒြိယပစ္စည်းများဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
သဠာယတနက ဖဿကို ကျေးဇူးပြုရာ၌ နိဿယ၊ ပုရေဇာတ၊ ဣန္ဒြိယ၊ ဝိပ္ပယုတ္တ၊ အတ္ထိ၊ အဝိဂတ၊ သဟဇာတ၊ အညမည၊ နိဿယ၊ ဝိပါက၊ အာဟာရ၊ ဣန္ဒြိယ၊ သမ္ပယုတ္တ၊ အတ္ထိ၊ အဝိဂတပစ္စည်းတို့ဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ဖဿက ဝေဒနာကို ကျေးဇူးပြုသောအခါ သဟဇာတ၊ အညမည၊ နိဿယ၊ ဝိပါက၊ အာဟာရ၊ သမ္ပယုတ္တ၊ အတ္ထိ၊ အဝိဂတပစ္စည်းတို့က အတူတကွဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြု၏။ ဥပနိဿယပစ္စည်းဖြင့် ဖဿက အရင် ဖြစ်၍ ဝေဒနာက နောက်မှ ဖြစ်ကာ ကျေးဇူးပြု၏။
ဝေဒနာက တဏှာကို ကျေးဇူးပြုသောအခါ ဥပနိဿယတစ်ခုတည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
တဏှာကြောင့် ဥပါဒါန်ဖြစ်သောအခါ (ဥပါဒါန်လေးပါးရှိပြီး၊ တရားကိုယ်အားဖြင့် လောဘနှင့် ဒိဋ္ဌိ ၂-ပါး ဖြစ်၏။) ဥပနိဿယပစ္စည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ သဟဇာတ၊ အညမည၊ နိဿယ၊ သမ္ပယုတ္တ၊ အတ္ထိ၊ အဝိဂတပစ္စည်းတို့ဖြင့်လည်း အတူတကွ ဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးပြု၏။
ဥပါဒါန်ကြောင့် ဘဝ(ကမ္မဘဝ၊ ဥပပတ္တိဘဝ ၂-မျိုးရှိရာ ဤနေရာတွင် ကမ္မဘဝကို ယူ၏။)ဖြစ်ရာတွင် ဥပနိဿယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ သဟဇာတ၊ အညမည၊ နိဿယ၊ သမ္ပယုတ္တ၊ အတ္ထိ၊ အဝိဂတ၊ ဟေတုသတ္တိတို့ဖြင့်လည်း အတူတကွ ကျေးဇူးပြု၏။
ဘဝ(ကမ္မဘဝ)က ဇာတိကို ကျေးဇူးပြုရာ၌ နာနာက္ခဏိကကမ္မသတ္တိ၊ ဥပနိဿယသတ္တိတို့ဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ဇာတိပစ္စယာ ဇရာ,မရဏ,သောက,ပရိဒေဝ,ဒုက္ခ,ဒေါမနဿ,ဥပါယာသဖြစ်ရာတွင် ဥပနိဿယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ဤသို့လျှင် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကွင်းဆက်(အင်္ဂါ)များမှာ ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့် အဘယ်ကဲ့သို့ သတ္တိများဖြင့် ကျေးဇူးပြုကြောင်း ဆက်သွယ်မှုကို နားလည်မှသာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် နားလည်လေသည်။
ပညတ်ဆိုသည်မှာ ပရမတ်အားဖြင့် ထင်ရှားရှိသော နာမ်တရား၊ ရုပ်တရားကို ဖယ်ထား၍ ပရမတ်အားဖြင့် ထင်ရှားမရှိသော ပရမတ်၏ အတုအယောင် သဘောမျိုးဖြင့် ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲခြင်းမျိုးကို ပညတ်ဟု ခေါ်ဆိုသည်။
၎င်းပညတ်သည် (၁) ခေါ်ဝေါ်အပ်သော အနက်ဒြပ်ဟု ဆိုအပ်သော အတ္ထပညတ်၊ (၂) ခေါ်ဝေါ်ကြောင်းဖြစ်သော အမည်သညာ သဒ္ဒါဝေါဟာရဟု ဆိုအပ်သော သဒ္ဒပညတ်ဟု ၂-မျိုး ပြား၏။
ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပာယ်မှာ - ‘ပုရိသော’ဟူသော သဒ္ဒါအသံဓာတ်သည် ယောက်ျားဒြပ် အကောင်အထည်တည်းဟူသော အနက်ကို သိစေတတ်သောကြောင့် ‘သဒ္ဒပညတ်’ မည်၏။ ၎င်းသဒ္ဒါသည် သိစေအပ်သောကြောင့် ယောက်ျားဒြပ်အနက်သည် ‘အတ္ထပညတ်’မည်၏။ ‘ပဗ္ဗတ’သဒ္ဒါသည် သဒ္ဒပညတ်၊ ‘တောင်’ဒြပ်သည် အတ္ထပညတ်မည်၏ ဟု သိရာ၏။
(၁) ပထဝီစသော မဟာဘုတ်တို့၏ ဖောက်ပြန်သော အခြင်းအရာကို စွဲ၍ ထိုထိုသို့သော အခြင်းအရာ ပုံဟန် သန္တာန်ကို စွဲ၍ ပညတ်သမုတ်အပ်သော မြေ, တောင် အစရှိသော ‘သဏ္ဍာနပညတ်’။
(၂) သစ်၊ မြေစိုင်၊ ချည် အစရှိသော အဆောက်အဦတို့၏ ပေါင်းစည်း စုဝေးသော အခြင်းအရာကို အစွဲပြု၍ ပညတ်သမုတ်အပ်သော အိမ်၊ ရထား၊ လှည်း၊ အိုး၊ ပုဆိုး စသော ‘သမူဟပညတ်’။
(၃) ခန္ဓာ ၅-ပါး အပေါင်းကို စွဲ၍ ပညတ်သမုတ်အပ်သော ယောက်ျားပုဂ္ဂိုလ်စသော ‘ဇာတိပညတ်’။
(၄) လ, နေ, နက္ခတ်တို့၏ မြင့်မိုရ်တောင်ကို လက်ျာရစ် လှည့်၍ သွားခြင်း အစရှိသော အခြင်းအရာကို စွဲ၍ ပညတ်သမုတ်အပ်သော အရှေ့အရပ်စသော ‘ဒိသာပညတ်’။
(၅) နံနက်စသော ‘ကာလပညတ်’။
(၆) ကဆုန်လစသော ‘မာသပညတ်’။
(၇) ထိုထိုသို့သော ရုပ်ကလာပ်တို့သည် မတွေ့ထိအပ်သော အခေါင်းစသော အခြင်းအရာကို စွဲ၍ ပညတ်သမုတ်အပ်သော တွင်းဂူလိုဏ်ပေါက်စသော ‘အာကာသပညတ်’။
(၈) ထိုထိုသို့သော အခြင်းအရာအားဖြင့် ထင်သော ပထဝီကသိုဏ်း အစရှိသော နိမိတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ပရိကမ္မ စသည်ဖြင့် ပြားသော ဘာဝနာ၏ အစဉ်ဟူသော အထူးကိုလည်းကောင်း စွဲ၍ သမုတ်အပ်သော ကသိုဏ်းနိမိတ်၊ အသုဘနိမိတ်၊ ဥဂ္ဂဟနိမိတ်၊ ပဋိဘာဂနိမိတ်စသော ‘နိမိတ္တပညတ်’။
ဤအတ္ထပညတ်များသည် ပရမတ္ထအားဖြင့် ဒြပ်အကောင်အထည် ထင်ရှား မရှိသော်လည်း သဘောဆတ်ဆတ် ပရမတ်ကို စွဲမြှောင်၍ အရိပ်အရောင် အတုဟူသော အခြင်းအရာအားဖြင့် စိတ်,စေတသိက် ပရမတ်တရားတို့၏ အခြံအရံအဖြစ်သို့ ရောက်၏။
ထို အတ္ထပညတ်ကို နာမပညတ်ဖြင့် သိစေအပ်၏။
ဝါစ္စပညတ်၊ ဝစနိယပညတ်၊ အတ္ထပညတ် ဟူသည် အတူတူပင် ဖြစ်၏။
ဝါစကပညတ်၊ နာမပညတ်၊ သဒ္ဒပညတ် ဟူသည်လည်း အတူတူပင် ဖြစ်၏။
(၁) ဝိဇ္ဇမာနပညတ် = ပရမတ္ထအားဖြင့် ထင်ရှားရှိသော ရုပ်,ဝေဒနာ စသော သဒ္ဒပညတ်မျိုး။
(၂) အဝိဇ္ဇမာနပညတ် = ပရမတ္ထအားဖြင့် ထင်ရှားမရှိသော မြေ, တောင်စသော အနက်ကို သိကြောင်းဖြစ်သော သဒ္ဒပညတ်မျိုး။
(၃) ဝိဇ္ဇမာနေန အဝိဇ္ဇမာနပညတ် = ပရမတ္ထအားဖြင့် ထင်ရှားရှိသည်ဖြစ်၍ ပရမတ္ထအားဖြင့် ထင်ရှားမရှိသော အနက်ကို သိစေသော ဆဠဘိညော (အဘိညာဉ်ရသောပုဂ္ဂိုလ်) စသော သဒ္ဒပညတ်။
(၄) အဝိဇ္ဇမာနေန ဝိဇ္ဇမာနပညတ် = ပရမတ္ထအားဖြင့် ထင်ရှားမရှိသောအနက်နှင့် ပရမတ္ထအားဖြင့် ထင်ရှားရှိသော အနက်ကို သိစေတတ်သော ဣတ္ထိသဒ္ဒေါ (မိန်းမအသံ) စသော သဒ္ဒပညတ်မျိုး။
(၅) ဝိဇ္ဇမာနေန ဝိဇ္ဇမာနပညတ် = ပရမတ္ထအားဖြင့် ထင်ရှားရှိသောအနက်နှင့် ပရမတ္ထအားဖြင့် ထင်ရှားရှိသော အနက်ကိုပင် သိစေသော စက္ခုဝိညာဏံစသော သဒ္ဒပညတ်မျိုး။
(၆) အဝိဇ္ဇမာနေန အဝိဇ္ဇာမာနပတ် = ပရမတ္ထအားဖြင့် ထင်ရှားမရှိသော အနက်နှင့် ပရမတ္ထအားဖြင့် ထင်ရှားမရှိသော အနက် ၂-ပါးကို သိစေသော ရာဇပုတ္တော စသော သဒ္ဒပညတ်။
အနက်နှင့် သဒ္ဒါကို ခြားနားစွာ သတိပြုရာ၏။
‘ပုတ္တော’ကား ပါဠိသဒ္ဒါ၊ ‘သား’ကား မြန်မာသဒ္ဒါ၊ ‘အထည်ကိုယ်ဒြပ်’သာ အနက်ဖြစ်၏။
ဤသို့ သဒ္ဒါနှင့် အနက်တို့၏ ခြားနားမှုကို သတိပြုမှသာ အတ္ထပညတ်နှင့် သဒ္ဒပညတ် ကွဲပြား၏။
အနက်ကို သိရာ၌ ဝီထိဖြစ်ပုံ
(၁) တစ်လုံးသော အက္ခရာရှိသော ‘လူ’စသော သဒ္ဒါရုံ၌ ပစ္စုပ္ပန် ‘လူ’ဟူသော သဒ္ဒါရုံကို အာရုံပြု၍ ‘သောတဒွါရဝီထိ’ တစ်ဝီထိ ကျ၏။
(၂) ထိုနောက် ချုပ်ပြီးသော ‘လူ’ဟူသော အတိတ်သဒ္ဒါရုံကို အာရုံပြု၍ ‘တဒနုဝတ္တကမနောဒွါရဝီထိ’ ဖြစ်၏။
(၃) ထိုနောင် လူဟူသော နာမပညတ်ကို အာရုံပြု၍ ‘သုဒ္ဓမနောဒွါရဝီထိ’ ဖြစ်၏။
(၄) ထိုနောင် လူ၏ခန္ဓာ ပဉ္စကဒြပ် အတ္ထပညတ်ကို အာရုံပြု၍ ‘သုဒ္ဓမနောဒွါရဝီထိ’ ဖြစ်၏။
ဤသို့ လေးဝီထိဖြစ်ပြီးမှ ‘လူ’ဟူသော အနက်ကို သိရ၏။
အက္ခရာ နှစ်လုံးဖြစ်သော ‘စာအုပ်’ဟု ကြားရာ၌ -
(၁) ပစ္စုပ္ပန် ‘စာ’သဒ္ဒါရုံကို အာရုံပြု၍ ‘သောတဒွါရဝီထိ’၊
(၂) အတိတ် ‘စာ’သဒ္ဒါရုံကို အာရုံပြု၍ ‘တဒနုဝတ္တကမနောဒွါရဝီထိ’၊
(၃) ပစ္စုပ္ပန် ‘အုပ်’သဒ္ဒါရုံကို အာရုံပြု၍ ‘သောတဒွါရဝီထိ’၊
(၄) အတိတ် ‘အုပ်’သဒ္ဒါရုံကို အာရုံပြု၍ ‘တဒနုဝတ္တကမနောဒွါရဝီထိ’၊
(၅) ‘စာအုပ်’ဟူသော နာမပညတ်ကို အာရုံပြု၍ ‘သုဒ္ဓမနောဒွါရဝီထိ’၊
(၆) ဒြပ်အနက် အတ္ထပညတ်ကို အာရုံပြု၍ ‘သုဒ္ဓမနောဒွါရဝီထိ’ဟူ၍ ၆-ဝီထိ ကျပြီးမှ ‘စာအုပ်’ဟူသော အနက်ကို သိရ၏။
ဤနည်းတူ အက္ခရာ သုံးလုံးဖြစ်သော ‘ဘုန်းကြီးကျောင်း’ဟု ကြားရာ၌ အက္ခရာတစ်လုံးလျှင် ‘သောတဒွါရဝီထိ’နှင့် ‘တဒနုဝတ္တကမနောဒွါရဝီထိ’ - ပေါင်း ၂-ဝီထိစီဖြင့် ၆-ဝီထိ၊ ထိုနောက် ‘ဘုန်းကြီးကျောင်း’ဟူသော နာမပညတ်ကို အာရုံပြု၍ ‘သုဒ္ဓမနောဒွါရဝီထိ’၊ ထိုနောက် ဘုန်းကြီးကျောင်း ဒြပ်အနက် အတ္ထပညတ်ကို အာရုံပြု၍ ‘သုဒ္ဓမနောဒွါရဝီထိ’ - စုစုပေါင်း ၈-ဝီထိ ဖြစ်ပြီးမှ ‘ဘုန်းကြီးကျောင်း’ဟူသော အနက်ကို သိရ၏။
အက္ခရာများလျှင် များသည့်အလျောက် ဝီထိတိုး၍ များလေတော့သည်။
အနက်ကို သိရခြင်းသည်လည်း သောတဝိညာဏ်၏ အာရုံအဖြစ်သို့ ကြားရောက်လာခြင်း၊ ရှေးအခါက ဤသဒ္ဒါသည် ဤအနက်ကို ဟောသည်ဟု ပိုင်းခြား မှတ်သားပြီး ရှိခြင်း - ဤအင်္ဂါနှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံမှ အနက်ကို သိစေနိုင်သည်။
နားထောင်သူ ပုဂ္ဂိုလ်သန္တာန်၌ နာမပညတ်ကို အရင် သိပြီးမှ၊ အတ္ထပညတ်ကို သိ၏။
ပြောဆိုသူ ပုဂ္ဂိုလ်သန္တာန်၌ အတ္ထပညတ်ကို သိပြီးမှ၊ နာမပညတ် ဖြစ်၏။
မြင်ခြင်း၊ နံခြင်း၊ အရသာသိခြင်း၊ တွေ့ထိခြင်းကိစ္စတို့၌ အတ္ထပညတ် ဖြစ်ပြီးမှ နာမပညတ် ဖြစ်၏။
ဥပမာ - ရူပါရုံတစ်ခုကို မြင်ရာ၌ -
(၁) ရှေးဦးစွာ စက္ခုဒွါရဝီထိစိတ်နှင့် ပစ္စုပ္ပန်ရူပါရုံ(ပုံရိပ်)ကို သိသည်။
(၂) ထိုနောက် တဒနုဝတ္တကမနောဒွါရဝီထိစိတ်ဖြင့် လွန်ပြီးသော အတိတ်ရူပါရုံကို သိသည်။
(၃) ထိုနောင် သုဒ္ဓမနောဒွါရဝီထိစိတ်ဖြင့် အတ္ထပညတ်ကို သိသည်။
(၄) ထိုနောက် သုဒ္ဓမနောဒွါရဝီထိစိတ်ဖြင့် နာမပညတ်ကို သိသည်။
Posted by LokaChantha at 5:29 PM No comments:
ဟေတု နာမ် နာမ်,ရုပ်
အာရမ္မဏ နာမ်,ရုပ်,နိဗ္ဗာန်,ပညတ် နာမ်
အဓိပတိ (အာရမ္မဏာဓိပတိ) နာမ်,ရုပ်,နိဗ္ဗာန် နာမ်
အဓိပတိ (သဟဇာတာဓိပတိ) နာမ် နာမ်
အနန္တရ, သမနန္တရ, အနန္တရူပနိဿယ, နတ္ထိ, ဝိဂတ နာမ် နာမ်
သဟဇာတ, သဟဇာတနိဿယ, သဟဇာတ္ထိ, သဟဇာတဝိဂတ နာမ်,ရုပ် နာမ်,ရုပ်
အညမည နာမ်,ရုပ် နာမ်,ရုပ်
နိဿယ (သဟဇာတနိဿယ) နာမ်,ရုပ် နာမ်,ရုပ်
နိဿယ (ဝတ္ထုပုရေဇာတနိဿယ) ရုပ် နာမ်
နိဿယ (ဝတ္ထုရမ္မဏပုရေဇာတနိဿယ) ရုပ် နာမ်
ဥပနိဿယ (အာရမ္မဏူပနိဿယ) နာမ်,ရုပ်,နိဗ္ဗာန် နာမ်
ဥပနိဿယ (အနန္တရူပနိဿယ) နာမ် နာမ်
ဥပနိဿယ (ပကတူပနိဿယ) နာမ်,ရုပ်,ပညတ် နာမ်
ပုရေဇာတ (ဝတ္ထုပုရေဇာတ) ရုပ် နာမ်
ပုရေဇာတ (အာရမ္မဏပုရေဇာတ) ရုပ် နာမ်
ပစ္ဆာဇာတ နာမ် ရုပ်
အာသေဝန နာမ် နာမ်
ကမ္မ (နာနက္ခဏိကကမ္မ) နာမ် နာမ်,ရုပ်
ကမ္မ (သဟဇာတကမ္မ) နာမ် နာမ်,ရုပ်
ဝိပါက နာမ် နာမ်,ရုပ်
အာဟာရ (ရုပ်အာဟာရ) ရုပ် ရုပ်
အာဟာရ (နာမ်အာဟာရ) နာမ် နာမ်,ရုပ်
ဣန္ဒြိယ (ဝတ္ထုပုရေဇာတိန္ဒြိယ) ရုပ် နာမ်
ဣန္ဒြိယ (ရူပဇီဝိတိန္ဒြိယ) ရုပ် ရုပ်
ဣန္ဒြိယ (သဟဇာတိန္ဒြိယ) နာမ် နာမ်,ရုပ်
ဈာန နာမ် နာမ်,ရုပ်
မဂ္ဂ နာမ် နာမ်,ရုပ်
သမ္ပယုတ္တ နာမ် နာမ်
ဝိပ္ပယုတ္တ (သဟဇာတဝိပ္ပယုတ်) နာမ်,ရုပ် နာမ်,ရုပ်
ဝိပ္ပယုတ္တ (ပုရေဇာတဝိပ္ပယုတ်) ရုပ် နာမ်
ဝိပ္ပယုတ္တ (ပစ္ဆာဇာတဝိပ္ပယုတ်) နာမ် ရုပ်
အထ္ထိပစ္စည်းသည် သဟဇာတတ္ထိ၊ ပုရေဇာတတ္ထိ၊ ပစ္ဆာဇာတတ္ထိ၊ အာဟာရတ္ထိ၊ ဣန္ဒြိယတ္ထိ အားဖြင့် ၅-ပါး အပြားရှိ၏။
ထို ၅-ပါးတို့တွင် -
သဟဇာတတ္ထိသည် သဟဇာတ ၃-ပါးနှင့် တူ၏။
ပစ္ဆာဇာတတ္ထိသည် ပစ္ဆဇာတနှင့် တူ၏။
နတ္ထိနှင့် ဝိဂတပစ္စည်းတို့သည် အနန္တရနှင့် တူ၏။
အဝိဂတသည် အတ္ထိနှင့် တူ၏။
ပစ္စည်းသဘောတူ ပေါင်း၍ ပြခြင်း
ဤ ၂၄-ပစ္စည်းတို့တွင် -
(၁) နာမ်သည် နာမ်အား ပစ္စည်း-ပစ္စယုပ္ပန်၏ အဖြစ်ဖြင့် ကျေးဇူးပြုရာ၌ အနန္တရ၊ သမနန္တရ၊ နတ္ထိ၊ ဝိဂတ၊ အာသေဝန၊ သမ္ပယုတ္တအားဖြင့် ၆-ပစ္စည်း။
(၂) နာမ်သည် နာမ်ရုပ်အား ပစ္စည်း-ပစ္စယုပ္ပန်အဖြစ်ဖြင့် ကျေးဇူးပြုရာ၌ ဟေတု၊ ဈာန၊ မဂ္ဂ၊ ကမ္မ၊ ဝိပါကအားဖြင့် ၅-ပစ္စည်း။
(၃) နာမ်သည် ရုပ်အား ကျေးဇူးပြုရာ၌ ပစ္ဆာဇာတပစ္စည်း။
(၄) ရုပ်သည် နာမ်အား ကျေးဇူးပြုရာ၌ ပုရေဇာတပစ္စည်း။
(၅) ပညတ်,နာမ်,ရုပ်တို့သည် နာမ်အား ကျေးဇူးပြုရာ၌ အာရမ္မဏ၊ ဥပနိဿယ ၂-ပစ္စည်း။
(၆) နာမ်ရုပ် ၂-ပါးသည် နာမ်ရုပ် ၂-ပါးအား ကျေးဇူးပြုရာ၌ အဓိပတိ၊ သဟဇာတ၊ အညမည၊ နိဿယ၊ အာဟာရ၊ ဣန္ဒြိယ၊ ဝိပ္ပယုတ္တ၊ အတ္ထိ၊ အဝိဂတအားဖြင့် ၉-ပစ္စည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုကုန်၏။
၂၄-ပစ္စည်းတို့ကို အကျဉ်းချုံး၍ သိမ်းရုံး ပေါင်းစည်းအပ်သည်ရှိသော် -
(၄) အတ္ထိ စသော ၄-ပစ္စည်းသို့သာ ဝင်ကုန်၏။
(၁) အာရမ္မဏပစ္စည်း၌ အာရမ္မဏာဓိပတိ၊ ဝတ္ထာရမ္မဏပုရေဇာတနိဿယ၊ အာရမ္မဏူပနိဿယ၊ အာရမ္မဏပုရေဇာတ၊ ဝတ္ထာရမ္မဏပုရေဇာတဝိပ္ပယုတ္တ၊ အာရမ္မဏပုရေဇာတတ္ထိ၊ အာရမ္မဏပုရေဇာတအဝိဂတ ဤ ၇-ပစ္စည်းနှင့် အာရမ္မဏပါ ပေါင်း ၈-ပစ္စည်းတို့သည် အာရမ္မဏ ရှစ်မျိုး မည်ကုန်၏။
(အာ၊ ဓိ၊ နိ၊ ဥ၊ ပု၊ ဝိပ်၊ အတ်၊ အဝိ တို့တည်း။)
(၂) ဥပနိဿယ၌ အနန္တရ၊ သမနန္တရ၊ အနန္တရူပနိဿယ၊ ပကတူပနိဿယ၊ အာသေဝန၊ အနန္တရကမ္မ၊ ဗလဝနာနာက္ခဏိကကမ္မ၊ နတ္ထိ၊ ဝိဂတ ဤ ၉-ပစ္စည်းတို့သည် ဥပနိဿယ ၉-မျိုး၊ ပစ္စည်းအားဖြင့် ၇-ပါး မည်ကုန်၏။
(အနံ၊ သနံ၊ ဥ၊ အာသေ၊ ကံ၊ နတ်၊ ဝိဂတ တို့တည်း။)
(၃) ကမ္မမှာ ကာမဝိပါက်အားတပ်သော ဒုဗ္ဗလကမ္မ၊ ကဋတ္ထာရုပ်အားတပ်သော ပဉ္စဝေါကာရကုသိုလ်, အကုသိုလ်စေတနာဟု ဆိုအပ်သော ဗလဝဒုဗ္ဗလကမ္မတစ်ပါးသာတည်း။ ဤကား နာနာက္ခဏိကကမ္မမျိုးတည်း။
(၄) အတ္ထိ၌ (က) သဟဇာတတ္ထိ၊ (ခ) ဝတ္ထုပုရေဇာတတ္ထိ၊ (ဂ) ပစ္ဆာဇာတတ္ထိ၊ (ဃ) ရူပအာဟာရတ္ထိ၊ (င) ရူပဇီဝိတိန္ဒြိယတ္ထိ ဟူ၍ ၅-ပါး အပြားရှိ၏။
(က)သဟဇာတတ္ထိ၌ ဟေတု၊ သဟဇာတာဓိပတိ၊ သဟဇာတ၊ အညမည၊ သဟဇာတနိဿယ၊ သဟဇာတကမ္မ၊ ဝိပါက၊ နာမ်အာဟာရ၊ သဟဇာတိန္ဒြိယ၊ ဈာန၊ မဂ္ဂ၊ သမ္ပယုတ္တ၊ သဟဇာတဝိပ္ပယုတ္တ၊ သဟဇာတတ္ထိ၊ သဟဇာတအဝိဂတ - ပေါင်း သဟဇာတမျိုး ၁၅-ပါး။
(ခ) ဝတ္ထုပုရေဇာတတ္ထိ၌ ဝတ္ထုပုရေဇာတနိဿယ၊ ဝတ္ထုပုရေဇာတ၊ ဝတ္ထုပုရေဇာတိန္ဒြိယ၊ ဝတ္ထုပုရေဇာတဝိပ္ပယုတ္တ၊ ဝတ္ထုပုရေဇာတတ္ထိ၊ ဝတ္ထုပုရေဇာတအဝိဂတ - ပေါင်း သဟဇာတ ၆-ပါး။
(ဂ) ပစ္ဆာဇာတတ္ထိ၌ ပစ္ဆာဇာတ၊ ပစ္ဆာဇာတဝိပ္ပယုတ္တ၊ ပစ္ဆာဇာတတ္ထိ၊ ပစ္ဆာဇာတအဝိဂတ - ပေါင်း ပစ္ဆာဇာတမျိုး ၄-ပါး။
(ဃ) ရူပအာဟာရတ္ထိ၌ ရုပ်အာဟာရ၊ ရုပ်အာဟာရတ္ထိ၊ ရူပါဟာရအဝိဂတ - ပေါင်း ရုပ်အာဟာရမျိုး ၃-ပါး။
(င) ရူပဇီဝိတိန္ဒြိယတ္ထိ၌ ရုပ်ဇီဝိတိနြေ္ဒ၊ ရူပဇီဝိတိန္ဒြိယတ္ထိ၊ ရူပဇီဝိတိန္ဒြိယအဝိဂတ - ပေါင်း ရူပဇီဝိတိန္ဒြိယမျိုး ၃-ပါး ဟူလို။
ကာလသုံးပါး စသည်ဖြင့် ဝေဖန်ပြခြင်း
ဟေတု၊ သဟဇာတ၊ အညမည၊ နိဿယ၊ ပုရေဇာတ၊ ပစ္ဆာဇာတ၊ ဝိပါက၊ အာဟာရ၊ ဣန္ဒြိယ၊ ဈာန၊ မဂ္ဂ၊ သမ္ပယုတ္တ၊ ဝိပ္ပယုတ္တ၊ အတ္ထိ၊ အဝိဂတ - ဤ ၁၅-ပစ္စည်းတို့သည် ပစ္စုပ္ပန်ကာလ တစ်ပါး၌ ဖြစ်၏။
အနန္တရ၊ သမနန္တရ၊ အာသေဝန၊ နတ္ထိ၊ ဝိဂတ - ၌ ၅-ပါးတို့သည် အတိတ်ကာလ တစ်ပါးတည်း၌သာ ဖြစ်၏။
ဤ ၂၀-သော ပစ္စည်းတို့သည် ကာလတစ်ပါးတည်း၌သာ ဖြစ်သော ပစ္စည်း မည်၏။
သဟဇာတကမ္မပစ္စည်းသည် ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌ ဖြစ်၍၊ နာနာက္ခဏိကကမ္မပစ္စည်းသည် အတိတ်ကာလ၌ ဖြစ်သောကြောင့် ကမ္မပစ္စည်းသည် ကာလ ၂-ပါး၌ ဖြစ်သော ဒွေကာလိကပစ္စည်း မည်၏။
အာရမ္မဏ၊ အဓိပတိ၊ ဥပနိဿယ ဤ ၃-ပစ္စည်းတို့သည် ပစ္စုပ္ပန်၊ အတိတ်၊ အနာဂတ်ဟူသော ကာလ ၃-ပါး၌ ဖြစ်ကုန်သောကြောင့် တေကာလိကပစ္စည်း မည်ကုန်၏။
နိဗ္ဗာန်, ပညတ် ၂-ပါးတို့သည် ကာလ ၃-ပါးမှ လွတ်သော တရားတို့ မည်ကုန်၏။
အာရမ္မဏ၊ အဓိပတိ၊ သဟဇာတ၊ အညမည၊ နိဿယ၊ ဥပနိဿယ၊ ပုရေဇာတ၊ အာဟာရ၊ အတ္ထိ၊ အဝိဂတ - ဤ ၁၀-ပါးသော ပစ္စည်းတို့သည် အဇ္ဈတ္ထ ဗဟိဒ္ဓ ၂-ပါးလုံး၌ ဖြစ်သော တရားတို့ မည်ကုန်၏။
ကြွင်းသော ၁၄-ပစ္စည်းတို့သည် အဇ္ဈတ္ထဖြစ်သော ပစ္စည်းတို့ မည်ကုန်၏။
(အချို့စာအုပ်များ၌ ဝတ္ထာရမ္မဏပုရေဇာတတ္ထိ၊ ဝတ္ထာရမ္မဏပုရေဇာတအဝိဂတ ဟု ဆို၏။ ဝတ္ထာရမ္မဏပုရေဇာတဆိုလျှင် ဝတ္ထုမဟုတ်သော အာရမ္မဏပုရေဇာတတို့ မပါဝင်နိုင်။ အာရမ္မဏပုရေဇာတဆိုမှ ဝတ္ထာရမ္မဏပုရေဇာတ၊ အာရမ္မဏပုရေဇာတ အားလုံး ပါဝင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အချို့စာအုပ်များ၌ ခွဲခြားပုံမှာ မစုံလင်။)
(ဖိုလ်အား ကျေးဇူးပြုသော မဂ္ဂစေတနာကို ပကတူပနိဿယ နာနာက္ခဏိကကမ္မတစိတ်ဟု ဆိုထားသည်။ ထိုစေတနာသည် နောက်နောက်စိတ်စေတသိက်အား ကျေးဇူးပြုသော ဗလဝရှေ့စိတ္တုပ္ပါဒ်တွင် ပါဝင်သောကြောင့် ပကတူပနိဿယတစိတ်လည်း ဟုတ်၏။ စေတနာတရားဖြစ်၍ နာနာက္ခဏိကကမ္မတစိတ်လည်း ဟုတ်၏။ အခြားမဲ့ဖိုလ်အား ကျေးဇူးပြုသောကြောင့် အနန္တရမျိုးတွင်လည်း ပါဝင်ရသည်။ ဤအနန္တရမျိုး ၇-ပါးကို အချို့စာအုပ်၌ “အနန္တရူပနိဿယပကတူပမျိုး”ဟုလည်း နာမည်ပေး၏။ ထိုသို့ပေးခြင်းသည် “အာရမ္မဏူပနိဿယ၊ ပေ၊ သမောဓာနံဂစ္ဆန္တိ”ဟူသော သင်္ဂြိုဟ်၌ ပြသည့် ပစ္စည်း ၄-မျိုးတွင် ဥပနိဿယမျိုး၌ ဤအနန္တရ ၇-ပါးလုံး ဝင်ကြရသောကြောင့် ကောင်းလှပေ၏။)
(အချို့စာအုပ်၌ “ပုရေဇာတမျိုး”ဟု နာမည်တပ်၏။ ပုရေဇာတဟု သာမန်ဆိုလျှင် အာရမ္မဏပုရေဇာတများပါ ပါဝင်ဖွယ် ရှိ၏။ ထိုအာရမ္မဏပုရေဇာတစုကား အာရမ္မဏမျိုး၌ ပါဝင်ခဲ့ပြီ။ ထို့ကြောင့် များစွာသော ဆရာမြတ်တို့က “ဝတ္ထုပုရေဇာတမျိုး”ဟု နာမည်တပ်ကြသည်။)
(“ရူပဇီဝိတိန္ဒြိယတ္ထိ”ဟုလည်း အချို့စာ ရှိ၏။ ပစ္စည်း ၄-မျိုးဖြင့် ခွဲလျှင် အတ္ထိမျိုးတွင် ပါဝင်ရမည် ဖြစ်၍ ကောင်း၏။)
၁။ နောက်နောက်စိတ်စေတသိက်အား တပ်သော ဗလဝဖြစ်သော ရှေးရှေးစိတ္တုပ္ပါဒ် ရုပ် ပညတ်ဟူသော သုဒ္ဓပကတူပနိဿယ။
၂။ ဝိပါက်နာမက္ခန္ဓာအား တပ်သော ဗလဝကံဟူသော မိဿကပကတူပနိဿယ နာနာက္ခဏိကကမ္မ။
(၁-သည် “ရာဂါဒယောပန၊ ပေ၊ ကုသလာဒိဓမ္မာနံ”နှင့် ညီ၏။ ၂-ကား “ကမ္မံ ဝိပါကာနံ”နှင့် ညီသည်။ ဗလဝကံကို ကောက်ရာ၌ အနန္တရမျိုးတွင် ပါဝင်ပြီးသော မဂ္ဂစေတနာကို ကြည်။ ဤပကတူပ ၂-မျိုးသည် ၃-ချက်စု ဆိုရိုးစာအုပ်များ၌ မရှိသော်လည်း သင်္ဂြိုဟ်မှာပင် တိုက်ရိုက် ရှိပေသည်။)
ကာမဝိပါက်အား တပ်သော ဒုဗ္ဗလကမ္မ, ကဋတ္တာရုပ်အား တပ်သော ဗလဝဒုဗ္ဗလကမ္မ။
[ကာမဝိပါက်အား တပ်သော ဗလဝကံမှာ ပကတူပနိဿယတွင် ပါဝင်ပြီ။ မဟဂ္ဂုတ်လောကုတ္တရာကံဟူသော စေတနာတို့ကား ဒုဗ္ဗလဟု မရှိ။ ဗလဝချည်းသာ ဖြစ်၍ ပကတူပနိဿယနှင့် အနန္တရမျိုးတွင် အသီးအသီး ပါဝင်လေပြီ။ ပကတူပနိဿယပစ္စယုပ္ပန်တွင် ကမ္မဇရုပ်များ မပါဝင်သောကြောင့် ထိုရုပ်တို့အား တပ်သော (ထိုရုပ်တို့ကို ဖြစ်စေတတ်သော) ကံဟူသမျှ ဗလဝဖြစ်ဖြစ်, ဒုဗ္ဗလဖြစ်ဖြစ် နာနာက္ခဏိကကမ္မ သက်သက်သာတည်း။]
၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၄ ရက် စနေနေ့ လောကချမ်းသာ ဆည်းဆာ တရားပွဲကို ဘော်လ်တီမိုးမြို့ အရှင်ကေလာသဝိဟာရ ဆရာတော် အရှင်ကစ္စာယနက ဟောကြား ချီးမြှင့်သွားခဲ့၏။
Posted by LokaChantha at 11:06 AM No comments: